Kick boxing – Fantomas II : Lasan’i Naval sy Fahendrena ny « Grand Prix » -
AccueilRaharaham-pirenenaKick boxing – Fantomas II : Lasan’i Naval sy Fahendrena ny « Grand Prix »
Nangotraka ny katrok’ady teo amin’ny taranja kick-boxing omaly, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Niditra tamin’ny andiany faharoa mantsy ny fifaninanana kick-boxing nampitondraina ny anarana « Fantomas ». Araka izany, katrok’ady miisa 21 no tazana tamin’ny fandaharana tamin’iny omaly iny. Feno olona ny kianja mitafo, ary nanamarika izany ny horakoraka tsy an-kijanon’ireo mpijery marobe.
Anisan’ny nampiavaka ny hetsika ny fisian’ny katrok’adin’ireo mpikatroka “favoris” tamin’ny alalan’ny “Grand Prix”. Katrok’ady roa no notanterahina teo amin’io “Grand Prix” io, ary ny ambiny kosa katrok’ady tsotra teo amin’ny sokajy lahy sy vavy.
Ho an’ity “Grand Prix” ity ihany, norombahin’i Naval ny teo amin’ny sokajy lehilahy, eo amin’ny sokajin-danja latsaky ny 63 kg. I Fahendrena kosa indray no nandrombaka izany teo amin’ny vehivavy, eo amin’ny sokajin-danja latsaky ny 60 kg.
Teo amin’ny fihaonan’i Naval avy amin’ny klioba FTBF sy Turbo avy amin’ny klioba CKBA, hita ho nanatombo tamin’ny traikefa i Naval, ary noporofoiny ny maha mpikatroka sangany azy eo amin’ny sokajin-danja misy azy.
Toraka izany koa i Fahendrena (AKFM) raha nikatroka tamin’i Machi (Antsirabe). Nanatombo tamin’ny traikefa nananany i Fahendrena amin’ny maha mpikatroka mandrafitra ny ekipa nasionaly azy. Na izany aza nanohitra ihany i Machi, saingy tsy tafavoaka satria nanatombo tamin’ny fahazoana isa hatrany i Fahendrena.
Ankoatra izay, nambaran’ny mpikarakara fa niavaka iny hetsika andiany faharoa iny, satria efa karazana “semi-pro” no nanaovan-dry zareo azy. Izany hoe, ho an’ny “Grand Prix”, ankoatra ny amboara sy medaly, notolorana lelavola 200 000 Ar ny mpandresy ary 100 000 Ar ny faharoa. Ho an’ny katrok’ady tsotra indray, 100 000 Ar ny an’ny mpandresy raha toa ka 50 000 Ar kosa ny mitana ny laharana faharoa.
Marihina fa mpanohana ofisialy sady mpiara-miasa tamin’iny hetsika “Fantomas II” ny vondrona RLM Communication.